Abavuni abahlinzeki neFektri - China Abavuni Abakhiqizi
Imininingwane Yomkhiqizo 4LZ-7 / 4LZ-8 okusanhlamvu okuzihambelayo kuhlanganisa umvuni kusetshenziselwa ukuvuna ukolweni, futhi kungavuna nelayisi. Umshini ungaqedela ukuvuna, ukubhula, ukwehlukanisa, ukuhlanza neminye imisebenzi ngasikhathi sinye. Umshini unesakhiwo esihlangene, ukusebenza okulula, ukusebenza okuguquguqukayo, ukusebenza kahle okuphezulu nemali yokuhola ngokushesha. Injini Yokucaciswa Kobuchwepheshe Ifaniswe namandla kw 110 Ubukhulu Ngokuphelele (L * W * H) mm 6740 * 2940 * 3380 Ingqikithi yesisindo kg 5640 ...
Imininingwane Yomkhiqizo Umshini wokuvuna ummbila oziphekela u-4YZ-4B / 3B wuhlobo lomshini wokuvuna ummbila ngesisekelo sokumunca kokubili ubuchwepheshe basekhaya nakwamanye amazwe obuphambili bezindlebe ezihlanganisa abavuni. Umshini uyinoveli ekwakhiweni, futhi ungaqedela yonke inqubo yokusebenza kusuka ekukhetheni ummbila, ukuhambisa, ukugoqa, nokupakisha ukusika utshani nokurisayikilisha ngasikhathi. Isetshenziswa ngokukhethekile ukuvuna izikhwebu zommbila. Ukucaciswa kobuchwepheshe Model 4YZ-4B Ukufaka ...